भारी बोक्ने नाम्लो, अहिले भोको पेटमा कसिएको छ ! – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/भारी बोक्ने नाम्लो, अहिले भोको पेटमा कसिएको छ !
काठमाडौं, २२ भदौ । गत बर्षको माघ महिना देखि नेपालमा उपस्थिति जनाएको को’रोना भाइरस संक्रमणको असर अझै कति भोग्नु पर्ने हो भन्ने अझै अनिश्चित छ । तर यस बीचमा नेपाली समाजले भोगेको पीडा अझ लम्बिने हो भने हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यता नै धराशायी बन्ने सम्भावना प्रबल देखिन थालिएको छ ।
अर्कोतर्फ को’रोनाको रोकथामका लागि लकडाउन र निषेधाज्ञालाई नै बलियो ओखती मान्दा अर्थतन्त्रको सबै परिसूचक कमजोर बन्न थालेपछि हरेक गृहणीमाथि भान्साको भार थपिदो छ भने भारी बोकेर घरको भार थामिरहेकाहरुको जीवन कहालीलाग्दो बन्दै गएको छ । सरकारले पनि को’रोना भाइरसको रोकथामका लागि लकडाउन र निषेधाज्ञा भन्दा अर्को ओखती नदेख्दा यस्ले पारेको असरले हरेक गृहणीको भान्सा कठिन बन्दै गएको छ ।
हुँदा खाने वर्गको दिनहरु कठिन बनिरहेका छन् भने हुने खानेहरुको भान्सा पनि सहज छैन । को’रोनाका कारण जारी लकडाउनसँगै धादिङ घर भई काठमाडौमा भारी बोकेर जीवन धानिरहेका गणेशबहादुर नेपालीले भारी बोक्ने काम पाउन छाडे महिनाको ४५ सय रुपैयाँ भाडा तिर्न नसक्दा घरबेटीले कोठाबाट निकालिदिए । अनि जीवन धान्न भारी बोक्ने नाम्लो, अहिले भोको पेटमा कसिएको छ । नेपालीलाई लाग्दैछ, रोगले भन्दा भोकले मरिन्छ । (कार्यक्रम सीधाकुरा जनतासंगबाट)
काठमाडौं आउँदै गरेको यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा : दुई जनाको मृत्यु, एकतिस घाइते